Bruno Fernandes Oo Digniin U Diray Xiddigaha Man United Kadib Guushii West Brom
HomeHoryaalka IngiriiskaBruno Fernandes oo digniin u diray xiddigaha Man United kadib guushii West Brom
November 23, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Bruno Fernandes ayaa doonaya inuu wax badan ka arko Man United ka dib guushoodii 1-0 ee ay ka gaareen West Brom.
Bruno Fernandes ayaa ugu yeeray asxaabtiisa kooxda Manchester United inay sare u qaadaan ciyaarta ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen West Bromwich Albion sabtidii.
Kadib qeybtii hore ee goolal la’aanta Fernandes ayaa u istaagay inuu dhaliyo goolkii guusha ee Red Devils oo rigoore loo dhigay daqiiqadii 56aad.
Manchester United ayaa ku dhibtooneysay inay qaab ciyaareed joogto ah hesho xilli ciyaareedkaan oo dhan, waxaana ay 13 dhibcood ka heleen sideedii kulan ee furitaanka Premier League xilli ciyaareedkan.
Kubadsameeyaha reer Portugal Fernandes ayaa qirtay in kooxdiisa ay xoogaa nasiib u heshay guushii ay gaareen sabtidii, waxaana uu ugu yeeray Manchester United inay sarre u qaadaan kulankooda isbuucyada soo socda.
Isagoo hadlayay ciyaarta ka dib, Fernandes wuxuu yiri : “Dabcan runtii muhiim ayey noo tahay inaan guuleysano kulankaan.
“Marka ugu horeysa maaha sababtoo ah waxay aheyd guushii ugu horeysay ee aan ku gaarnay Old Trafford laakiin waxaan u baahanahay inaan dhibco ka helno horyaalka.
“Waxay ahayd ciyaar adag. Wax badan ayaan qaban karnaa. Wax badan ayaan abuurnay laakiin waxaan leenahay sifooyin aan wax badan kaga sii fiicnaan karno.
Fernandes ayaa qaab ciyaareed fiican ku jira xilli ciyaareedkan, iyadoo 26 jirkaan uu dhaliyay lix gool seddexna caawiye Premier League xilli ciyaareedkan.